I-Norfolk Broads character house on Village green - I-Airbnb
I-Norfolk Broads character house on Village green
Martham, England, i-United Kingdom
Indlu ka-Victoria elungisiwe enamakamelo okulala amabili futhi etholakala kahle edolobhaneni eliluhlaza elinedamu e-Norfolk Broads National Park. Ingadi enelanga enezindawo zokuhlala kanye nendawo yokupaka ngaphandle kwendlu.
Izitolo, ama-pub, izindawo zokuvakashelwa kanye nokuma kwebhasi esinyathelweni somnyango kanye namabhishi adumile ogwini lwase-Norfolk amamayela angu-3.5 kude namathuba amahle okubuka izinyoni nokubukwa kwezinyoni. Hamba uye eMfuleni i-Thurne ngesikebhe/izikebhe eziqashisayo ezitholakalayo; tusa ukubhukha kusengaphambili.
Itholakala enkabeni yedolobhana ekupheleni komgwaqo ongadluli emgwaqweni oluhlaza, kukhona indawo yokupaka emgwaqweni ngaphandle kwendlu. Ukushisisa okuphakathi namanzi ashisayo kuhlinzekwa yi-boiler yepulangwe (imiyalo egcwele enikeziwe) futhi ukuhlinzekwa kwamanzi ashisayo kufakwa iphaneli yelanga ophahleni.
Ikamelo lokuhlala linezihlalo zabantu abane, isitofu sezinkuni (izingodo ezinikeziwe), i-Smart TV ene-iPlayer ne-HiFi/umsakazo. Kukhona izinhlobo ezinhle zezincwadi nama-CD owamukelekile ukuwasebenzisa.
Umshini wokuwasha onomshini wokomisa izingubo kanye nefriza ungaphansi kwezitebhisi.
Ikhishi linomshini wokugeza izitsha, umshini wokupheka kagesi onehhavini eliphezulu/i-grill kanye nohhavini oyinhloko, i-ceramic hob ezine nomshini we-espresso. Ikhishi linendawo yokudlela ebukeka kahle engadini engemuva.
Phezulu endlini, kunamakamelo okulala amabili anemibhede elala abantu ababili nenkulu kanye namakhaphethi afakiwe.
Igumbi lokugezela lesitezi sokuqala lineshawa, geza umcengezi wezandla ne-WC, i-radiator kanye nesitimela esinamathawula afudumele. Kukhona nendlu yangasese kwenye yezakhiwo ezingemuva engadini ukuze isetshenziswe ezimweni eziphuthumayo!
4.96 out of 5 stars from 29 reviews
4.96 · 29 okushiwo abanye
Kukhona ukufinyelela okulula kokuhamba ngezinyawo endaweni, isitolo esikhulu kuhlanganise nehhovisi lokuposa, ukuvakasha namaphabhu. Indlu ibekwe edolobhaneni eliluhlaza eduze kwedamu.
Ukuhamba ngemoto imizuzu eyishumi, ibhasi noma umjikelezo wemizuzu engu-30 kuzokuyisa ebhishi elihle eliseduze e-Winterton okwamanje eneveni yekhofi. Inhlanzi enhle kakhulu nesitolo se-chip e-Winterton, situsa uku-oda kusengaphambili ngocingo.
Ngingase ngitholakale ukuze ngikwamukele uma kungenzeka, ngaphandle kwalokho kunesikhiye esiphephile sokuba uqoqe ukhiye womnyango wangemuva futhi nizingenele. Ngicela uthintane nathi ukuze ngikwazi ukuphendula noma yimiphi imibuzo noma nginikeze eminye imininingwane uma kudingeka.
Ngingase ngitholakale ukuze ngikwamukele uma kungenzeka, ngaphandle kwalokho kunesikhiye esiphephile sokuba uqoqe ukhiye womnyango wangemuva futhi nizingenele. Ngicela uthintane…
Hlola ezinye izinketho ezise- Martham namaphethelo